March 2021 - Page2of 10 - Myanmar People Alliance
Unicode ချစ်သူရည်းစားထားဖူးသည့်လူတိုင်းအချစ်ကလေး၏ အူတိုကာစိတ်မချဖြစ်ခံရသောအချိန်ကာလလေးကို ကြုံဖူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့် အရာရာစိတ်ပူပြီး အူတိုနေသည့်ချစ်သူကို တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ပျက်မိကြမှာပါ။ ယခုတွင်လည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှအမျိုးသားတစ်ဦးဟာချစ်သူကောင်မလေးကဆိုင်ကယ်အကောင်းစာကြီးစီးနေသည့်အတွက်စိတ်ပူကာအူတိုနေခဲ့ပါတယ်။ ထိုအမျိုးသားကို ကောင်မလေးဟာအခြားကောင်မလေးများကိုဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်စီးနေသည်ဟု စွပ်စွဲသောကြောင့်အမျိုးသားဟာစိတ်မရှည်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဆိုင်ကယ်ထိုင်ခုံ၏နောက်ပိုင်းကိုမည်သူမှစီးမရစေရန်အတွက်သံမှိုများဖြင့် အပြည့်ပြုလုပ်ထားပစ်ခဲ့ပါတယ်။အကယ်၍ချစ်သူကောင်မလေးနှင့် ဆိုင်ကယ်အတူစီးရန်လိုအပ်လာပါကချစ်သူကောင်မလေးကို ရှေ့ဂွခြားထဲမှနေပြီး လိုက်စီးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ Zawgyi ခ်စ္သူရည္းစားထားဖူးသည့္လူတိုင္းအခ်စ္ကေလး၏ အူတိုကာစိတ္မခ်ျဖစ္ခံရေသာအခ်ိန္ကာလေလးကို
Unicode ငွေတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်မက်လေ့ရှိတဲ့ရှေ့ပြေးအိပ်မက်များအကြောင်း ငွေဝင်ခါနီးပြီးဆိုရင်မက်လေ့ရှိတဲ့ ရှေ့ပြေးနိမိတ်အိမ်မက်တွေအိမ်မက်အမျိုူးမျိုးရှိပါတယ်။တစ်ချို့အိမ်မက် တွေက ရှေ့မှာဖြစ်လာ တော့မယ့်အရာတွေကို နိမိတ်ပြတဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုအရာ တွေကိုမယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးတွေရှိ ကောင်းရှိ နိုင် ပေမယ့်အပြင် မှာတကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့၊ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သာဓက တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပိုက်ဆံဝင်ခါနီးရင်ဘယ်လိုအိမ်မက်မျိုး တွေမက် လေ့ရှိလဲဆိုတာကိုတော့filipinotimes မှာအခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Unicode သာသနာပြုမင်းပေါ်မည့်အချိန်နှင့်ပျောက်ဆုံးသွားသောသဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး၏နဂါးပလ္လင်ပြန်ပေါ်လာမည့်အချိန် သဲအင်းဂူဆရာတော်ကိုလူတို့သာမကနဂါးမင်းများကပါကြည်ညို ကြလေသည်။ထိုကြောင့်လဲဆရာတော်အတွက်ပလ္လင်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ကိုအထူးကောင်း မွန်လှသောသစ်ကနက်ပင်များဖြင့်နဂါးပလ္လင်ပြုလုပ်ရန်လူတို့အားအိမ်မက်ပေး ကာနေရာပြလေသည်။ဆရာတော်တွက်ပလ္လင်ပြုလုပ်ပြီး၍တရားဟောသောအခါနဂါးများလည်းလာရောက်နာကြားလေသည်။၁၉၇၃ခုနှစ်ဆရာတော် ခန္ဓာဝန်ချ သွားသည့်အခါနဂါးပလ္လင်လည်းထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားသည်။ ထိုနဂါးပလ္လင်ကြီးသည်ဆရာတော်ကို ကြည်ညိုသောနဂါးမင်းများမှမိုးကြီးလေကြီးချစေကာလူသူမရှိသောအချိန်ပင့်ဆောင်သွားလေသည်။ဆရာတာ်၏တပည့်ဒကာများကအပူတပြင်းလိုက်ရှာ ကြသော်လည်းမတွေ့ရ တော့ပေ။ (မှတ်ချက်။သဲအင်းဂူဆရာတော်ရှိစဉ်အခါကဆရာတော်နဂါးပလ္လင်ထက်၌တရားဟောနေစဉ်တရွီရွီနှင့် မြွေသံများကြားရသဖြင့်သစ်တောဝန်ကနောက်နေ့မနက်တွင်မေးလျောက်လေသဖြင့်မိန့်ကြားလေသည်။ဒကာကြီးမနေ့ညကနဂါး တွေလည်းလူတို့မမြင်အပ်သော နေရာတို့တွင်တရားလာနာလို့ကြားရခြင်းသာဖြစ်တယ်။ထိုနောက်ဆရာတော်ကနဂါးမင်း၏သဒ္ဒါကြောင့်နဂါးပလ္လင်ကြီး ဖြစ်လာသောအကြောင်းများနဲ့ဆရာတော်ကြီးမရှိတော့သောအချိန်တွင်သူ၏ ပလ္လင်အားနဂါးများမှပင့်ဆောင်သားကြမည့်အကြောင်းကိုလည်းမိန့်ကြားခဲ့သည်။ထိုအပြင်ဆရာတော်၏ပလ္လင်က နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ပေါ်လာဦးမည့်အကြောင်းနှင့်ထိုတစ်ခေါက်ပြန်ပေါ်ပြီးသော်အပြီးတိုင်ပျာက်ကွယ်သွားမည့်
Unicode လူတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုသိရုံနှင့်စိတ်အခြအနေသိနိုင်အောင်တွက်ကြည့်နည်း မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဆန်းနည်းလေးကိုတန်ဖိုးထားမြတ်နိုးသောအားဖြင့်ပြန်လည်မျှဝေ ရေးသားပေးလိုက် ရတာပါ။မှန်တယ်မမှန်ဖူးဆိုတာတော့မိတ်ဆွေများကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်ကြ စေချင်ပါတယ်နော် …။ နည်းလေးကတော့လူတိုင်းကိုယ်တိုင်တွက်လို့အဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်နော် …။ အောက်ဖေါ်ပြပါဥပဒေသကိုမှတ်ထားပါ …။ အ ၊အာ ၊ဥ ၊ သြ ၊ ဧ =
Unicode သဘာဝတရားကြီးဟာ အံဩဖွယ်ရာများနှင့်မကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့ သေတ္တာကြီးတစ်ခုလိုပါပဲ။ တချို့ သဘာဝဖန်တီးမှုတွေဟာ မှော်ဆန်ဆန် မှော်အတတ်လောကမှ လာခဲ့သလားလို့ ကျွန်ုပ်တို့မထင်ပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့မရလောက်အောင် မှော်ဆန်နေကြပါတယ်။ယခုဖော်ပြပေးမှာကတော့သင့်နေ့စဉ်ဘဝတွင်မတွေ့နိုင်သည့်ရှားပါးသောအရာများပင်ဖြစ်ကြပါတယ်။ (၁)ဘရာဇီးနိုင်ငံကAristolochia giganteaလို့ခေါ်တဲ့ မှော်ဆန်သောပန်းတစ်ပွင့်။ (၂)Sempervivum tectorumအမည်ရှိသောထူးဆန်းတဲ့အပင်။ (၃)တစ္ဆေလိုမျိုးမှိုတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့Hericiumamericanumမှို။ (၄)Pebbled Tiger Jawsဟုခေါ်သော
Unicode Metthew Lepreအမည်ရှိအသက်၂၆နှစ်အရွယ်နဲ့သန်းကြွယ်သူဌေး သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ Sydney မြို့မှာ နေထိုင်နေပါတယ်။သူနဲ့အတူကမ္ဘာကို လျှောက်လည်းခြင်းဖြင့်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ၅၂,၀၀၀ ပေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီငယ်ရွယ်တဲ့သန်းကြွယ်သူဌေးဟာ ၁၈နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်ပုံစံနေထိုင်ပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေလည်းချမှတ်ထားတာမရှိပါဘူး။”ကျွန်တော်က လူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီးသူတို့ရဲအိမ်မက်လေးတွေကိုသိချင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်နဲ့အတူထွက်လည်ဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ”လို့ Metthew က ပြောဆိုထားပါတယ်။Metthew က သူ့အသက် ၂၃နှစ်အရွယ်မှာ သွားဘက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကို
1.ကလေးရယ် ဘယ်လိုများကျော်ခွလိုက်တာလဲ 2. 3. 4.ဖုန်းကိုဘယ်လိုပြန်သွားယူရမလဲ 5.ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ထားရတဲ့ရုပ်ထု အောက်ပြုတ်ကျသွားတာ ရယ်ရမလား ငိုရမလားပဲ 6.အေးအေးဆေးဆေးအနားယူဖို့ အပန်းဖြေခရီးထွက်လာတာလေ 7.ဟဲ့ငါပါဘောလုံးမဟုတ်ဘူး 8.ဖေဖေသားအင်အင်းပါချင်တယ် 9.အမလေးကယ်ကြပါဦး 10.နည်းနည်းလေးတော့လွဲသွားတယ် 11.Happy Birthdayကံဆိုးတဲ့မွေးနေ့လေးပါ 12.ဒုက္ခပါပဲမီးသတ်ကားကမီးလောင်နေတယ် 13.ကလေးပဲကံဆိုးတာလားလမ်းခင်းတဲ့သူပဲကံဆိုးတာလား 14.အဲ့ဒီမှာစတွေ့တာပဲ
Unicode မိုက်ရူးရဲဆန်တဲ့လက်ထပ်ခွင်းတောင်းတာတွေကို ကျွန်တော်များစွာမြင်တွေ့နေရပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာလည်းအလွန်ကိုဆိုးရွားလွန်တဲ့အရာကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။Anthony Taylorဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေး Stephanie Walkerကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းရန်အတွက် အမှတ်ရဖွယ်ဖြစ်စေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားချင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကြံက သူမကို ရေငုပ်နေစဉ် ရေထဲမှာသူမကိုကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းစုံတွဲနှစ်ဦးဟာတူရကီကမ်းရိုးတန်းမှာ ရေငုပ်သမားတွေဖြစ်တာကြောင့် Anthony က ရေအောက်မှာသူမကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့ မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာသူမရဲ့မျက်နှာဖုံးကို ရေဝင်သွားတာကြောင့်အသက်ရှုရပ်ခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မလို့သင်တန်းပို့ချသူတွေကသူမကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ” Yes”ဆိုတဲ့
Unicode မြန်မာနိုင်ငံတွင်တစ်ဦး၏အခက်အခဲကိုတစ်ဦးကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြသည်မှာထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုမဟုတ်တော့ပေ။မြန်မာနိုင်ငံသူ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းသည်သူတစ်ပါးအားကူညီပေးချင်သောဆန္ဒများသည် အသွေးအသားထဲတွင် အမြဲစီးဆင်းနေပေသည်။ဥရောပတိုက်တွင်တော့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးကူညီရန်မှာ အနည်းငယ်တွန့်ဆုတ်နေတတ်ကြသည်။သို့သော်အချိုသူများသည်လည်းကူညီပေးတတ်ကြပေသည်။ယခုတွင်လည်း ကနေဒါနိုင်ငံ ဖွန်ဟေးလ်တွင်လူငယ်လေး၃ဦးသည်ညအချိန်တွင်ဒုက္ခရောက်နေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို လေးစားဖွယ်ကောင်းအောင် ကူညီခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးသည်ညအချိန်တွင်ကားပျက်ကာအိမ်ပြန်ရန်အခက်အခဲဖြစ်နေခဲ့သောကြောင့်လူငယ်လေး၃ဦးဟာအိမ်အထိကို ကားတွန်းပြီး လိုက်ပို့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသမီး၏အိမ်ဟာကားပျက်နေသောနေရာနှင့် ၉ကီလိုမိတာခန့်ဝေးကွားလှပြီးကောင်လေးတွေဟာအိမ်အထိရောက်ရှိစေရန် ၂နာရီခန့်ကြာအောင်တွန်းပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်။ Zawgyi ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တစ္ဦး၏အခက္အခဲကိုတစ္ဦးကဝိုင္းဝန္းကူညီေပးၾကသည္မွာထူးဆန္းေသာအရာတစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ေပ။ျမန္မာႏိုင္ငံသူ
Unicode ဆံပင်ပါးပြီးဆံပင်ခဏခဏကျွတ်တတ်သူတွေအတွက် ဆံပင်ပါးပြီးဆံပင်ခဏခဏကျွတ်တတ်သူတွေအတွက်ကြက်သွန်နီနဲ့ထိန်းသိမ်းနည်း Shampooထဲပါဝင်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကကိုယ့်ဆံပင်ကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဆံပင်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာလည်းဆံပင်ကျွတ်လွယ်စေပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်တာကတော်တော်စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာပါ။ ဆံပင်ပါးလွန်းတာကလည်းကျန်းမာတဲ့ဆံသားပုံစံမရဖို့တံတိုင်းကြီးတစ်ခုလိုပါပဲ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆံပင်ပါးပြီးခဏခဏဆံပင်ကျွတ်တတ်သူတွေအတွက်ကြက်သွန်နီကိုသုံးပြီးထိန်းသိမ်းနည်းကို ဖော်ပြပါရစေ။ ဆံပင်အတွက်ကြက်သွန်နီရဲ့ကောင်းကျိုးများ ကြက်သွန်နီကဆံသားကိုခိုင်မာစေပြီးအားဖြည့်ပေးပါတယ်။ဆံပင်အရှည်မြန်စေပြီးဆံပင်ကျွတ်သက်သာစေပါတယ်။ ပြုလုပ်ပုံ ကြက်သွန်နီတစ်ဥယူပြီးလှီးပေးရပါမယ်။ လှီးပြီးနောက်ကျိတ်စက်ထဲရေထည့်ပြီးကျိတ်ပေးရပါမယ်။ ရလာတဲ့ကျိတ်ပြီးသား ကြက်သွန်နီကိုဇယားနဲ့ စစ်ချပြီး အရေရအောင်စစ်ချယူရပါမယ်။ အသုံးပြုပုံ ရလာတဲ့ကြက်သွန်နီအရည်ထဲကိုဝါဂွမ်းနှစ်ပေးရပါမယ်။